Ikuku ntanetị na-enweghị nchebe dị mma ma ọ bụ na ọ bụghị? | Gam akporosis
Agbanyeghi na ekwuputaghi ya rue mbido afọ a na ha abụọ Xiaomi dị ka Motorola ga-enwe wireless wireless nchajiNke a bụ ihe e kwupụtara maka ogologo oge. Ebe ọ bụ na Nchaji ikuku na ngwaọrụ anyị, n'ofe ebe ahụ afọ 2012, teknụzụ a pụtara nnukwu nkà na ụzụ. N'oge ahụ ọ bụ ezigbo ọganihu. Teknụzụ nke ahụ kwere nkwa na anyị ga-ewepụ wires otu ugboro, ma nke a abụghị ikpe.
Dị ka anyị hụworo, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 9 mgbe e mesịrị, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime ọrụ-anọgide na-eji ot chaja Na eriri. Ọ bụ mmadụ ole na ole taa na-eji teknụzụ ikuku akwụ ụgwọ ngwaọrụ ha. Na ebumnobi ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu, ọbụlagodi na smartphones nwere teknụzụ na-enweghị eriri, ndị na-emepụta anaghị etinye chaja ndị a mgbe ha na-azụ ihe. Inwe ịzụta ha iche, inwe nke na-arụkwa ọrụ, emeela ka nkà na ụzụ a ghara ịkwụsị.
1 Xiaomi na Motorola na-enye "ugbu a" ikuku ikuku na-akwụ ụgwọ
2 Nwere ụfọdụ ambiguous nche jikoro
Xiaomi na Motorola na-enye "ugbu a" ikuku ikuku na-akwụ ụgwọ
Anyị niile doro anya banyere ihe ikuku ikuku na-agụnye. Anyị na-etinye ekwentị anyị na ntọala, na ekele maka kọntaktị na teknụzụ mepụtara maka ya, ngwaọrụ ahụ na-amalite ịgba ụgwọ batrị ya na-enweghị itinye ya. Ugbu a Xiaomi dị ka Motorola (na ma eleghị anya ọtụtụ ndị na-emepụta ngwa ngwa) Ha na-enye eriri ikuku na-achọghị kọntaktị ọ bụla. Ya mere, ọ nwere ike ime ka ekwentị anyị kwụọ ụgwọ n ’ebe dị anya. A priori bụ a n'ezie na-akpali ọhụrụ nke ahụ nwere ike iru gbanwee ụzọ anyị si eji ekwentị anyị. Mana ọ dị ka nke a ga-eme n'ime ogologo oge.
Otu n'ime nchegbu na-eme ugboro ugboro kasị n'etiti ndị ọrụ bụ ma ọ bụrụ na ọ ime awusa nwere ike na-emerụ ahụ ike. N'achọghị imebie ube iji mebie otu ụlọ ọrụ abụọ a, o yiri ihe ezi uche dị na ya ee. Anyị ejighị ya kpọrọ ihe na teknụzụ mepụtara ruo n'ókè nke iji obi ụtọ na-ekwupụta ya dị ka ihe ọhụrụ nke anyị ga-enweta n'oge na-adịghị anya, ga-enwerịrị ọmụmụ ihe niile dị mkpa nke mere na ọ bụ 100% mma. Mana n'aghọtaghị ihe ọ bụla gbasara otu esi akwụ ụgwọ, ma ọ bụ teknụzụ ya, ihe kpatara ya bụ nghọta.
Nwere ụfọdụ ambiguous nche jikoro
Isi ihe bụ na ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ abụọ ahụ adabakọwo na-enye teknụzụ a, mmepe na nke ọ bụla mere ọ bụ kpam kpam dị iche iche. N'etinyeghị nkọwa zuru ezu, ha abụọ na-ekwu na ikuku ikuku na-adịghị emerụ emerụ maka ụmụ mmadụ. Ha na-emesi ya ike iji ya eme ihe zuru oke. Emebeghị ka teknụzụ na-enweghị eriri ikuku zuru ezu iji nye ya ọhaneze. Anyị maara nke ahụ ihe bụ otu n’ime ihe mgbochi kachasị mkpa, ihe mgbochi anụ ahụ, enweela mmeri nke ọma. Agbanyeghi na ọ bụbu “nsogbu”, ịgba ụgwọ adịworị anaghị emetụta ya na ọsọ ma ọ bụ kwụsịtụrụ ọbụna ma ọ bụrụ na e nwere ihe dị n’etiti chaja na smartphone.
N'echiche a, ebe nkwupụta nke Motorola nyere, anyị nwere ike wepụ ụfọdụ nchedo. N'ime ozi ndị na-enweghị isi, ọ na-esote nke ahụ ọ bụru madzụ gude ụzo n'etiti ngwaọrụ na isi iyi, nke a ọ ga-akwụsị na-akpaghị aka. Nkwupụta a, na-elegharaghị ọtụtụ ndị, ga-eme ka ha kwere ọbụna ajụjụ ndị ọzọ. Kedu ihe kpatara eji ewere nke a dịka nchekwa? Ọ na-eweta ihe egwu ọ bụla? Ugbu a arụmụka nchekwa ahụ na-arụ ọrụ, na ebe anyị enweghị ohere ịnwale ikuku na-akwụ ụgwọ n'echeghị anya, anyị enweghị nhọrọ ọ bụla mana ichere maka akụkọ ọhụụ ma nwee ndidi ka ọ nwee ike iru ndị ọrụ niile n'oge na-adịghị anya.
Site na ntụkwasị obi na teknụzụ ọhụrụ na mmepe, anyị nwere olileanya na wireless ime Nchaji agwụ elu ịbụ kpamkpam mma. Karịsịa, anyị na-atụ anya ịnweta ya n'oge na-adịghị anya n’agaghị akwụ nnukwu ụgwọ maka ya. Eziokwu bu chajụọ anyị mobile ikuku, gbakwunyere na-enweghị ịhapụỌ ga-abụ ezigbo ọganiihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ikuku ntanetị na-enweghị nchebe dị mma ma ọ bụ na ọ bụghị?
Xiaomi Mi 11 International bụ onye ọrụ gọọmentị na Snapdragon 888 na 6,81 "WQHD + AMOLED panel